Sithi asikwazi nokuhlala isalukazi 'esidlwengulwe umakhelwane' | News24
Sithi asikwazi nokuhlala isalukazi 'esidlwengulwe umakhelwane'
Kimberley - Akakwazi nokuhlala owesifazane oneminyaka engu-68 ubudala ngemuva kwezinsolo zokudlwengulwa umakhelwane wakhe, abazukulu bakhe ababili belele eceleni kwakhe embhedeni wakhe, eLerato Park, ekuqaleni kwesonto.
Lo wesifazane, obebelethe emhlane umzukulu wakhe omncane ngoLwesithathu, uthe uthole ukwelashwa esibhedlela iGaleshewe Day nesaseKimberley ngenxa yeninga yesibeletho kulandela ukudlwengulwa ngoMsombuluko ekuseni ngezithuba zbao-03:30.
"Kufanele ngihlinzwe kulandela ukulimala kwami kanti njengamanje ngisezinhlungwini ezinzima."
OLUNYE UDABA:Kudlwengulwe isalukazi ngoba sinemali encane
Uthe ubezama ukuvikela abazukulu bakhe, onezinyanga ezingu-8 ezelwe noneminyaka emibili ubudala, ngesikhathi edlwengulwa.
"Bengizumekile ngangamuzwa umuntu ongena endlini. Ngibe sengizwa into esindayo phezu kwami kodwa ngihluleka ukuvuka. Engikwaziyo nje ukuthi bekwenzeka into engalungile. Umsolwa ubebukeka njengomakhelwane wami oneminyaka engu-51 ubudala kodwa bengisaphethwe ubuthongo angibonanga kahle."
Ikhansela lewadi uPaul Kok, elibikelwe yilungu lomphakathi ngesigameko, lithe umsolwa ujahwe ngamalungu omphathi kanye nawe-Operation Wanya Tsotsi ngoLwesithathu, wabanjwa waboshwa.
"Umsolwa ubesemzini wakhe kanti ngesikhathi esengibona ngingena emzini wakhe uvele wabaleka. Sibe sesimjaha samthola sase simnikela emaphoyiseni," kusho uKok.
Okhulumela amaphoyisa uCaptain Bashoabile Kale, uthe umsolwa uboshwe ngoLwesithathu ngamalungu amaphoyisa aseRoodepan kulandela uphenyo.
"Umsolwa, 51, uthweswe icala lokudlwengula kanti kulindele ukuba avele eNkantolo yeMantshi yaseKimberley maduze," kusho uKale.
- Diamond Fields Advertiser